Mashruuca Qaboojiyaha Hawada ee Goobta Dadweynaha
Qaboojiye hawo warshadeed qabow oo loogu talagalay warshadda caaryada duritaanka
Qaboojiye hawo warshadeed qabow oo loogu talagalay warshadda caaryada duritaanka Dhibaatooyinka deegaanka ayaa aad muhiim ugu ah shirkadaha wax-qaabeeya. Gaar ahaan, baahida hadda jirta ee kaydinta tamarta iyo dhimista qiiqa baahida deegaanka ayaa aad u sareysa. Marka daraasiin mashiinada qaabaynta duritaanka ay wada shaqeeyaan...
Warshada waxay rakibi kartaa XIKOO qaboojiye hawo warshadeed
Shirkadan qasacadaysan waxay leedahay dhul aqoon iswaydaarsi ah oo dhan 15000 mitir oo laba jibbaaran, dhererkeeduna waa 15m, waa goob shaqo oo casri ah, waxa kale oo ay leedahay qaab dhismeed bir ah, marka ay cadceedu soo baxayso waxa ay soo saartaa kulayl oo ay gasho aqoon iswaydaarsi, waxaanay ku dartaa kulaylka. laga soo bilaabo qalabka wax soo saarka ballaaran,...
XIKOO qaboojiye hawo qabow oo loogu talagalay jikada Laojia chaifang
Guangzhou LaoJia chaifang cuntada waa shirkad silsilad dheri kulul leh. kaas oo u isticmaalaya xaabada cunto karinta, markaa habkani waxa uu soo saaraa kulayl badan iyo qiiq. marka macaamiishu ku raaxaystaan ​​dheriga kulul halkan, waxaa jira uumi oo waxay soo saartaa kulayl. Intaa waxaa dheer, maqaayadda waxaa lagu dhisay go'yaal bir ah, sida aan ognahay, waxay ...
Qaboojiyaha XIKOO wuxuu keenaa qabow iyo hawo siminaarka
Guangdong Guangzhou liyuan technology Co., Ltd. Waxay dooratay XIKOO qaboojiye hawo uumi warshadeed sida qaboojinta iyo qalabka hawo-siinta aqoon-is-weydaarsigooda wax-soo-saarka. Aqoon-is-weydaarsigu waxa uu leeyahay dhul dhismeedkiisu dhan yahay 2,400 mitir oo laba jibbaaran, waana goob shaqo oo furan oo hawo wanaagsan laga heli karo. Taageeraha weyn wuxuu ahaa asal...
XIKOO qaboojiyaha uumi-qaboojiyaha ayaa si ballaaran u qaboojiya meelo kala duwan
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo horumarinta degdega ah ee tignoolajiyada qaboojinta uumi-baxa iyo wacyiga dadka ee badbaadinta tamarta iyo dhimista qiiqa. Qaboojinta uumi-baxa iyo qaboojiyaha deegaanka saaxiibtinimo ayaa sidoo kale si weyn loo isticmaalay
Xalka tamarta badbaadinta ee qaboojinta degdega ah iyo ka saarista kulaylka ee aqoon-is-weydaarsiga warshad wax soo saarka baabuurta
Warshada soo saarta baabuurta waxa ay ku qalabaysan tahay aqoon iswaydaarsi habsocod sida shaambaynta, alxanka, rinjiyeynta, qaabaynta duritaanka, isu imaatinka ugu dambeeya, iyo hubinta gaadhiga. Qalabka mashiinka waa mid aad u weyn oo daboolaya aag ballaaran. Haddii qaboojiye loo isticmaalo in lagu qaboojiyo heerkulka, qiimuhu aad buu u sarreeyaa...
Taageereyaasha warshaduhu waa mid ka mid ah xulashooyinka loo isticmaalo hawo-qaadista iyo qaboojinta fadhiga
Waa maxay nooca mashiinada iyo qalabka loo isticmaalo siminaarka warshadda oo leh hawlo awood leh? Aqoon-is-weydaarsiyada warshaduhu waa kuwo ballaaran, guud ahaanna waa ballaaran yihiin, awoodda shaqada ee hawo-mareenada dabiiciga ah maaha mid xooggan, waana mid xiran, taas oo sababta heerkulka qolka oo dhan inuu joogo ...
XIKOO qaboojiye uumi uumi qaadi karo oo la qaadi karo ayaa u qabow makhaayad
Xagaaga kulul, dadku aad bay u rabaan inay u baxaan inay wax ka cunaan makhaayadda. Makhaayado badan ayaa ka buuxa macaamiil, waana inay miiska iyo kursiga dhigaan bannaanka si ay ugu adeegaan macaamiil badan. Macaamiisha qaarna waxay door bidaan inay dibadda wax ka cunaan, waxay isu keeni karaan oo ay la sheekaysan karaan asxaabtooda si deggan. Hadaba sida loo keeno c...
Xikoo qaboojiye weyn oo centrifugal ah oo loogu talagalay warshadda dharka ee Bangladesh
Sida aan ognahay waxaa Bangladesh ku yaal warshado waaweyn oo waaweyn. waxayna aad ugu kulushahay bilaha April ilaa December sanad walba Bangladesh. Markaa hawo-qaadista iyo qaboojinta ayaa aad muhiim ugu ah warshadaha. Qaboojiyaha warshadaha oo lagu daray marawaxada qiiqa waxay ku siin kartaa hawo iyo xal qabow . haddii kale, hawada c...
Xikoo qaboojiyaha isticmaalka korontada yar ee warshadda dharka
Aad bay ugu kulul tahay Guangzhou bisha Luulyo sannad kasta. Warshada Dharka, Waxaa jira shaqaale badan oo ay ku hareeraysan yihiin alaab dhar ah oo ka shaqeeya aqoon-is-weydaarsiga alaabta, aad ayey u kulul tahay in si hufan loo shaqeeyo. Shirkadda dharka ee Guangzhou zhengjia ayaa waligeed ka iibsatay qaboojiyaha hawada warshadaha ee xikoo. Qaboojiyaha hawadu waa ok inuu ku qaboojiyo gudaha...
Xikoo qaboojiyaha hawada ee xarunta tababarka
Qaboojiyaha la qaadi karo ee ay soo saartay XIKOO Industry waxay dhamaantood ku saleysan yihiin tayada badeecada heerka warshadaha, ku shaqeynta badeecada, saameynta qaboojinta, iyo tayada habka badeecada. Dhammaantood waxay leeyihiin heerar sare. Si loo oggolaado macaamiishu inay yeeshaan khibrad wax soo saar wanaagsan. La kulan macmiilka de...
XIKOO qaboojiyaha hawada warshadaha ee warshadda dharka
Aqoon isweydaarsiga cusub ee warshadda dharka ee Changmiao ayaa la soo gabagabeeyay horaantii sanadkan. Awaamiirtooda dibadda ayaa aad u kordhay sanadkan. Markaa aqoon-is-weydaarsiga cusub ayaa bilaabay inuu shaqeeyo, Aqoon-is-weydaarsiga dharka, waxaa jira tiro badan oo shaqaale iyo mashiinno ah. Haddii aysan jirin hawo wanaagsan oo qabow, e...